Ukushisa komhlaba kukomisa uLwandle lweCaspian | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kubangela izinto ezingakholeki emhlabeni wonke njengale esizokhuluma ngayo. ICaspian Sea ingumzimba wamanzi omkhulu kunawo wonke etholakala maphakathi nezwe kuwo wonke umuntu emhlabeni. Kodwa-ke, ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, iyahwamuka kancane kancane kodwa kancane kancane kule minyaka engamashumi amabili edlule.
Ukwanda kwamazinga okushisa ahambisana nokuguquka kwesimo sezulu kanye nokushisa komhlaba kwenza ukuthi uLwandle iCaspian lulahlekelwe amanzi amaningi. Lokhu kungaba namiphi imiphumela?
1 Ukutadisha oLwandle lweCaspian
2 Imiphumela yokushisa komhlaba
Ukutadisha oLwandle lweCaspian
Amanzi wamanzi oLwandle iCaspian kwehle cishe amasentimitha ayi-7 ngonyaka kusuka ngo-1996 kuya ku-2015, noma cishe amamitha ayi-1,5 esewonke, ngokusho kwemiphumela yocwaningo olusha. Izinga lamanje loLwandle iCaspian lingamamitha ayi-1 kuphela ngaphezu kwezinga lomlando eliphansi kakhulu elifinyelelwe ngasekupheleni kwawo-1970.
Lokhu ukuhwamuka kwamanzi oLwandle iCaspian kuhlotshaniswe namazinga aphezulu okushisa omoya ebusweni bolwandle. Imininingwane yocwaningo iveze ukuthi amazinga okushisa oLwandle iCaspian enyuke ngezinga elilodwa phakathi kwezikhathi ezimbili ezibhekwe phakathi konyaka we-1979-1995 nowe-1996-2015.
Imiphumela yokushisa komhlaba
Imiphumela yokwanda kwamazinga okushisa okubangelwe ukufudumala komhlaba iholela ekulahlekelweni komthamo omkhulu waleli chibi lamanzi anosawoti kanye nokwehla kwezinhlobo ezihlala kulo ezizohlupheka njengoba amazinga okushisa eplanethi ekhula ngokwengeziwe.
ULwandle iCaspian luzungezwe izizwe ezinhlanu futhi luqukethe imithombo yemvelo eningi kanye nezilwane zasendle ezahlukahlukene. Futhi kungumthombo obalulekile wokudoba emazweni azungezile. Ngakho-ke ukwehla kwayo kuzoba nemiphumela esikhathini esizayo.
Kuyamangalisa ukubona ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kukwazi kanjani ukuhwamukisa izilwandle esezihlale lapho izigidi zeminyaka futhi emakhulwini ambalwa nje eminyaka zinyamalala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukufudumala kwembulunga yonke komisa uLwandle iCaspian